မိမိနေအိမ်၊ ခြံဝင်းအတွင်း တောင်ပို့ပေါက်ခဲ့လျှင် ကောင်းတာလား မကောင်းတာလား သိချင်သူများအတွက်.. - Barnyar Barnyar
နေအိမ်အောက်တွင် တောင်ပို့ပေါက်သည့်အခါ တချို့လူများက အိမ်ကိုဖျက်ဆီးမည်ဟု သဘောထားကာ တောင်ပို့ကို တူးဆွဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ကြသည်… တချို့လူများကတော့ ကောင်းကျိုးပေးမည့်အရာဟု သဘောထားပြီး ရာဇမတ်လေးဖက်လေးတန်ကာ၍ တံခွန်၊ ကုက္ကား၊ မုလေးပွားများစိုက်၊ အမွှေးနံ့သာများပက်ဖျန်းကြသည်…
ဖယောင်းတိုင်၊ အမွှေးတိုင်များကို အဆက်မပြတ် ထွန်းညှိ ပူဇော်ထားကြသည်… တောင်ပို့က တစ်စထက်တစ်စ မြင့်တက်လာရာ အိမ်ကဆင့်တန်းဖြုတ်၊ ခင်းထားသော ပျဉ်ချပ်များကို ခွာပစ်ရသည်အထိ ယုံကြည်ကိုးစားစွာဖြင့် ရိုသေစွာထားကြသည်ကိုလည်း တွေ့ဖူးသည်။
ညီငယ်လေးပမာခင်မင်ရသော သက်ကိုက သူ၏အိမ်အောက်တွင် တောင်ပို့ပေါက်လာသည့်အခါ အဆိုပါတောင်ပို့ကို သည်အတိုင်းပဲ ထားရမည်လား၊ တောင်ပို့ကို ဖြိုချပစ်ရမည်လားဟု မေးခဲ့ဖူးပါသည်… များစွာသောလူတို့သည် အိမ်ထဲ သို့မဟုတ် ခြံဝင်းထဲ၌ တောင်ပို့ပေါက်လာလျှင် ကောင်းသည်ဟုသာ ထင်မှတ်ကြလေသည်…
ရှေးလူကြီးသူမတို့ကမူ ကောင်းကျိုး၏ ရှေ့ပြေးဖြစ်သော တောင်ပို့ပေါက်မှုနှင့် မကောင်းကျိုး၏ ရှေ့ပြေးဖြစ်သော တောင်ပို့ပေါက်မှုဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိကြောင်း ဆိုခဲ့ကြပေသည်…
ရှေးလူကြီးသူမတို့သည် အကြားအမြင်၊ ဗဟုသုတ ရင့်ကျက်ကြသူများပီပီ နောင်လာနောက်သားတို့ တောင်ပို့ပေါက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကို သိမြင်မှတ်သား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ကဗျာလင်္ကာများ စပ်ဆို ထားခဲ့ပေသည် …
၎င်းလင်္ကာမှာ ၁. အရှေ့တောင်ခွင်၊ တောင်ပို့ထင်၊ မီးလျှင်လောင်တတ်စွ၂. အနောက်ပေါက်ငြား၊ အောက်လူများ နာဖျားဘေးဒဏ်ရ၊ ၃. အနောက်တောင်တွင်၊ တောင်ပို့မြင်၊ သူလျှင် ခိုးတတ်လှ၊ ၄. ကြင်းငါးရပ်မှာ၊ ပေါက်ရောက်လာ၊ မှန်စွာချမ်းကြည်မြ၊ ၅. မကောင်းရပ်နေ၊ ပေါက်လာပေ၊ ရွှေရည်လောင်း လေကြ၊ ၆. ဤသို့ယတြာ၊ ပြုသောခါ၊ ရောဂါရန်ကွယ် ဟူ၍ဖြစ်သည်။
အဋ္ဌလဂ်ခွင်အရ အရပ်ရှစ်ပါးရှိရာ ၁. အရှေ့မြောက်အရပ်၊၂. အရှေ့အရပ်၊၃.အရှေ့တောင်အရပ်၊ ၄. တောင်အရပ်၊ ၅. အနောက်တောင်အရပ်၊ ၆. အနောက်အရပ်၊ ၇. အနောက် မြောက်အရပ်၊ ၈. မြောက်အရပ်ဟူ၍ ဖြစ်လေသည်။
အိမ်အတွင်း၊ ခြံဝင်းအတွင်း တောင်ပို့ပေါက်သော အရပ်သည် မည်သည့်အရပ်၌ ဖြစ်သည်ကို တိကျစွာ သတ်မှတ်ရပါမည်။ ရှေးလူကြီးသူမတို့ မိန့်ဆိုခဲ့သော ကဗျာလင်္ကာအရ တောင်ပို့ပေါက်သော အရပ်သည် အရှေ့တောင်ထောင့်အရပ် ဖြစ်ပါက အိမ်ကို မီးလောင်တတ်သည်။
အနောက်အရပ်တွင် ဖြစ်ပါက လူငယ်လူရွယ်များ နာဖျားတတ်သည်။ ဘေးရန်သင့်တတ်သည်။ အနောက်တောင်အရပ်တွင် ဖြစ်ပါက နေအိမ်တွင် သူခိုးခိုး ခံရတတ်သည်။ ကျန်သည့် အရပ်ငါးမျိုးတွင် တောင်ပို့ပေါက်ပါက စည်းစိမ်ဥစ္စာ ကြီးပွားတိုးတက် ချမ်းသာမည်ဟု ဆိုလိုပေသည်။
မကောင်းသောအရပ်တွင် တောင်ပို့ပေါက်လျှင် မည်သို့ ပြုလုပ်ရမည်ကို ရှေးဗေဒကဝိတို့က ယတြာထားခဲ့ကြသည်။ ၎င်းယတြာမှာ မိမိအိမ်သောက်ရေအိုးထဲမှ ရေကို ခပ်၍ မကောင်းသော ဘေးအန္တရာယ်များ ပပျောက်ပါစေဟု ဆုတောင်းကာ ပေါက်လာသည့်တောင်ပို့ပေါ်သို့ နောက်ပြန်လောင်းရပေမည်။
နေအိမ် (သို့မဟုတ်) ခြံဝင်းထဲ၌ တောင်ပို့ပေါက်ပါက အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့မနေဘဲ ကောင်းကျိုးလား၊ မကောင်းကျိုးလား ဆိုသည်ကို အထက်ပါလင်္ကာအရ ဆန်းစစ်ကာ မကောင်းကျိုးဖြစ်ပါက ယတြာချေရုံသာ ရှိပါတော့သတည်း။
ဝင်းဇော်(သုံးဆယ်) ရွှေပေါက်ဆိန်ဂျာနယ် အတွဲ(၃)၊ အမှတ် ၆၀တွင် ဖေါ်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်) credit
မိမိနအေိမျ၊ ခွံဝငျးအတှငျး တောငျပို့ပေါကျခဲ့လြှငျ ကောငျးတာလား မကောငျးတာလား သိခငျြသူမြားအတှကျ..
နအေိမျအောကျတှငျ တောငျပို့ပေါကျသညျ့အခါ တခြို့လူမြားက အိမျကိုဖကျြဆီးမညျဟု သဘောထားကာ တောငျပို့ကို တူးဆှဖယျထုတျပဈလိုကျကွသညျ… တခြို့လူမြားကတော့ ကောငျးကြိုးပေးမညျ့အရာဟု သဘောထားပွီး ရာဇမတျလေးဖကျလေးတနျကာ၍ တံခှနျ၊ ကုက်ကား၊ မုလေးပှားမြားစိုကျ၊ အမှေးနံ့သာမြားပကျဖနျြးကွသညျ…
ဖယောငျးတိုငျ၊ အမှေးတိုငျမြားကို အဆကျမပွတျ ထှနျးညှိ ပူဇျောထားကွသညျ… တောငျပို့က တဈစထကျတဈစ မွငျ့တကျလာရာ အိမျကဆငျ့တနျးဖွုတျ၊ ခငျးထားသော ပဉျြခပျြမြားကို ခှာပဈရသညျအထိ ယုံကွညျကိုးစားစှာဖွငျ့ ရိုသစှောထားကွသညျကိုလညျး တှဖေူ့းသညျ။
ညီငယျလေးပမာခငျမငျရသော သကျကိုက သူ၏အိမျအောကျတှငျ တောငျပို့ပေါကျလာသညျ့အခါ အဆိုပါတောငျပို့ကို သညျအတိုငျးပဲ ထားရမညျလား၊ တောငျပို့ကို ဖွိုခပြဈရမညျလားဟု မေးခဲ့ဖူးပါသညျ… မြားစှာသောလူတို့သညျ အိမျထဲ သို့မဟုတျ ခွံဝငျးထဲ၌ တောငျပို့ပေါကျလာလြှငျ ကောငျးသညျဟုသာ ထငျမှတျကွလသေညျ…
ရှေးလူကွီးသူမတို့ကမူ ကောငျးကြိုး၏ ရှပွေ့ေးဖွဈသော တောငျပို့ပေါကျမှုနှငျ့ မကောငျးကြိုး၏ ရှပွေ့ေးဖွဈသော တောငျပို့ပေါကျမှုဟူ၍ နှဈမြိုးရှိကွောငျး ဆိုခဲ့ကွပသေညျ…
ရှေးလူကွီးသူမတို့သညျ အကွားအမွငျ၊ ဗဟုသုတ ရငျ့ကကျြကွသူမြားပီပီ နောငျလာနောကျသားတို့ တောငျပို့ပေါကျခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ကောငျးခွငျးဆိုးခွငျးကို သိမွငျမှတျသား လိုကျနာ ဆောငျရှကျနိုငျစရေနျ ကဗြာလင်ျကာမြား စပျဆို ထားခဲ့ပသေညျ …
၎င်းငျးလင်ျကာမှာ ၁. အရှတေ့ောငျခှငျ၊ တောငျပို့ထငျ၊ မီးလြှငျလောငျတတျစှ၂. အနောကျပေါကျငွား၊ အောကျလူမြား နာဖြားဘေးဒဏျရ၊ ၃. အနောကျတောငျတှငျ၊ တောငျပို့မွငျ၊ သူလြှငျ ခိုးတတျလှ၊ ၄. ကွငျးငါးရပျမှာ၊ ပေါကျရောကျလာ၊ မှနျစှာခမျြးကွညျမွ၊ ၅. မကောငျးရပျနေ၊ ပေါကျလာပေ၊ ရှရေညျလောငျး လကွေ၊ ၆. ဤသို့ယတွာ၊ ပွုသောခါ၊ ရောဂါရနျကှယျ ဟူ၍ဖွဈသညျ။
အဋ်ဌလဂျခှငျအရ အရပျရှဈပါးရှိရာ ၁. အရှမွေ့ောကျအရပျ၊၂. အရှအေ့ရပျ၊၃.အရှတေ့ောငျအရပျ၊ ၄. တောငျအရပျ၊ ၅. အနောကျတောငျအရပျ၊ ၆. အနောကျအရပျ၊ ၇. အနောကျ မွောကျအရပျ၊ ၈. မွောကျအရပျဟူ၍ ဖွဈလသေညျ။
အိမျအတှငျး၊ ခွံဝငျးအတှငျး တောငျပို့ပေါကျသော အရပျသညျ မညျသညျ့အရပျ၌ ဖွဈသညျကို တိကစြှာ သတျမှတျရပါမညျ။ ရှေးလူကွီးသူမတို့ မိနျ့ဆိုခဲ့သော ကဗြာလင်ျကာအရ တောငျပို့ပေါကျသော အရပျသညျ အရှတေ့ောငျထောငျ့အရပျ ဖွဈပါက အိမျကို မီးလောငျတတျသညျ။
အနောကျအရပျတှငျ ဖွဈပါက လူငယျလူရှယျမြား နာဖြားတတျသညျ။ ဘေးရနျသငျ့တတျသညျ။ အနောကျတောငျအရပျတှငျ ဖွဈပါက နအေိမျတှငျ သူခိုးခိုး ခံရတတျသညျ။ ကနျြသညျ့ အရပျငါးမြိုးတှငျ တောငျပို့ပေါကျပါက စညျးစိမျဥစ်စာ ကွီးပှားတိုးတကျ ခမျြးသာမညျဟု ဆိုလိုပသေညျ။
မကောငျးသောအရပျတှငျ တောငျပို့ပေါကျလြှငျ မညျသို့ ပွုလုပျရမညျကို ရှေးဗဒေကဝိတို့က ယတွာထားခဲ့ကွသညျ။ ၎င်းငျးယတွာမှာ မိမိအိမျသောကျရအေိုးထဲမှ ရကေို ခပျ၍ မကောငျးသော ဘေးအန်တရာယျမြား ပပြောကျပါစဟေု ဆုတောငျးကာ ပေါကျလာသညျ့တောငျပို့ပျေါသို့ နောကျပွနျလောငျးရပမေညျ။
နအေိမျ (သို့မဟုတျ) ခွံဝငျးထဲ၌ တောငျပို့ပေါကျပါက အမှုမဲ့အမှတျမဲ့မနဘေဲ ကောငျးကြိုးလား၊ မကောငျးကြိုးလား ဆိုသညျကို အထကျပါလင်ျကာအရ ဆနျးစဈကာ မကောငျးကြိုးဖွဈပါက ယတွာခရြေုံသာ ရှိပါတော့သတညျး။
ဝငျးဇျော(သုံးဆယျ) ရှပေေါကျဆိနျဂြာနယျ အတှဲ(၃)၊ အမှတျ ၆၀တှငျ ဖျေါပွပွီး ဖွဈပါသညျ) credit